रोज्नुहोस्घुसाउनुहोस् - पुस्तकचिनो
निश्चित पुस्तकचिनोमा जानका लागि, F5 थिच्नुहोस् खोल्नका लागि, नेभिगेटर, जोड सङ्केत क्लिक गर्नुहोस् (+) पुस्तकचिनो प्रविष्टि पछि र त्यसपछि डबल क्लिक गर्नुहोस् पुस्तकचिनोमा.
पुस्तकचिनोको नाम लेख्नुहोस् जुन तपाईँंले निर्मान गर्न चाहनु भएको थियो. तल्लो सूचीले सबै हालको कागजातको पुस्तकचिनोहरू देखाउँदछ. पुस्तकचिनो मेटाउन, सूचीमा चयन गर्नुहोस् , र त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् Delete.
तपाईँंले तलका क्यारेक्टरहरू पुस्तकचिनो नाममा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न: / \_ @ : * ? " ; , . #
पुस्तकचिनो मेटाउन, पुस्तकचिनो चयन गर्नुहोस् पुस्तकचिनो घुसाउनुहोस् संवादबाट र क्लिक गर्नुहोस् Delete बटन. कुनै निश्चित संवाद अनुगमन हुँदैन.
Title is: पृष्ठचिनो घुसाउनुहोस्